Gersón Beltrán ho an'ny Twingeo fanontana faha-5 - Geofumadas
Janoary, 2021 jeospatial - GIS, Engineering
Inona no ataon'ny mpahay jeografia?
Efa ela izahay no te-hifandray amin'ilay mpandray anjara tamin'ity tafatafa ity. Gersón Beltrán dia niresaka tamin'i Laura García, ampahany amin'ny ekipan'ny Gazety Geofumadas sy Twingeo mba hanomezana ny fomba fijeriny ny ankehitriny sy ny hoavin'ny jeografia. Manomboka amin'ny fanontaniantsika azy ny zavatra tena ataon'ny Geographer iray ary raha - araka ny adin-tsaintsika matetika - dia voafetra ihany isika amin'ny "fanaovana sarintany". Nanantitrantitra izany i Gerson "Ireo manao sarintany dia mpanadihady taloha na injeniera geomatika, izahay mpandinika jeografia dia mandika azy ireo, ho anay dia tsy misy fiafarany izany, fa fomba iray, fiteninay amin'ny serasera izany."
Ho azy, "miasa ny jeografia amin'ny sehatra lehibe dimy: ny fandrindrana ny tanàn-dehibe, ny fampandrosoana ny faritany, ny haitao ara-informatika, ny tontolo iainana ary ny fiarahamonina manam-pahalalana. Avy any no ahafahantsika milaza fa isika dia ny siansa momba ny toerana ary, noho izany, dia miasa amin'ny lafiny rehetra izay ifandraisan'ny zanak'olombelona amin'ny tontolo iainana manodidina azy isika ary manana singa ara-potoana miharihary. Manana ny fahaizana mijery ireo tetik'asa amin'ny fomba fijery manerantany izahay hampifangaro ny fahatsapana ny fifehezana hafa mba hamakafaka, hitantana ary hanova ny faritany ”.
Tato ho ato dia hitantsika fa omena lanja lehibe kokoa ny jeotechnologies ary noho izany dia takiana ireo matihanina amin'ity sehatra ity mba hahafahan'izy ireo manaraka tsara ny fizotran'ny fitantanana data. Ny fanontaniana dia inona ny maha-zava-dehibe ny asa mifandraika amin'ny jeotechnologies, izay novalian'ny vahiny fa "Ny indostrian'ny geospatial dia manavaka ny taranja rehetra momba ny siansa eto an-tany. Androany ny orinasa rehetra dia mampiasa ny elanelam-potoana, ny sasany ihany no tsy mahalala an'io. Izy rehetra dia samy manana harena voaangona amin'ny angon-drakitra voajanahary, mila mahafantatra ny fomba fitrandrahana azy fotsiny ianao, mitsabo azy ary mahazo ny sandany. Ny ho avy dia hitohy ho bebe kokoa amin'ny habaka noho ny zava-drehetra mitranga any ho any ary tena ilaina ny fampidirana an'io miovaova io mba hanana fahitana feno momba ny sehatra rehetra ".
Momba ny GIS + BIM
Ny maro an'isa dia mazava tsara fa ity revolisiona indostrialy faha-4 ity dia manana ny tanjony amin'ny famoronana tanàna hendry. Ny olana dia tonga rehefa misy tsy fitovizan'ny eritreritra momba ny fitaovam-pitantanana data, ho an'ny iray tsara ny BIM, ho an'ny hafa ny GIS dia tokony ho lohalaharana. Nanazava ny heviny momba io raharaha io i Gerson “Raha misy fitaovana mamela ny fitantanana ny tanàna manan-tsaina amin'izao fotoana izao dia tsy misy isalasalana fa ny GIS. Ny foto-kevitra fizarana ny tanàna ho sosona mifandraika ary miaraka amina fampahalalana marobe dia fototry ny GIS sy ny fitantanana ny habaka, farafaharatsiny hatramin'ny taona XNUMX. Ho ahy dia ny BIM no GIS an'ny mpanao mari-trano, tena ilaina, miaraka amin'ny filozofia mitovy, fa amin'ny ambaratonga hafa. Tena mitovy amin'ny taloha izy niara-niasa tamin'i Arcgis na Autocad.
Noho izany, ny fampidirana GIS + BIM no filamatra mety tsara, -ny fanontaniana an-tapitrisany dolara, hoy ny sasany- "Amin'ny farany ny filamatra dia ny afaka mampiditra azy ireo, satria ny trano tsy misy toe-javatra tsy misy dikany ary toerana tsy misy trano (farafaharatsiny ao an-tanàna) koa. Toy ny fampidirana ny Google Street View eny an-dalambe miaraka amin'i Google 360 ​​ao anaty tranobe, tsy tokony hisy fitsaharana, tokony hitohy izy io, raha ny tokony ho izy, misy sari-tany mitondra antsika avy any Milky Way mankany Wi- Fi ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny ary ny zava-drehetra dia hifandray amin'ny sosona maranitra. Mikasika ny zaza kambana nomerika, mety ho ao anatin'ity tombontsoa ity izy ireo na tsia, amin'ny farany dia momba ny fomba fiasa hafa izany ary, araka ny efa nolazaiko, dia resaka ambaratonga kokoa io ”.
Misy fitaovana GIS marobe izao na tsy miankina na maimaim-poana ampiasaina, samy manana ny tombony samihafa, ary miankina amin'ny fahaizan'ny manam-pahaizana ilay mpandalina. Na dia nilaza taminay aza i Beltrán fa tsy mampiasa rindrambaiko GIS maimaimpoana izy dia naneho ny heviny “amin'ireo mpiara-miasa aminy ary mamaky be dia be, toa napetraka i QGIS, na dia mijanona any Amerika Latina aza ny GVSIG ho lohatenin'ny GIS. Saingy misy safidy hafa mahaliana toa an'i GeoWE na eMapic any Espana. Ireo mpamorona izay tsy dia avy amin'ny tontolon'ny geo dia miara-miasa amin'i Leaflet sy ny hafa mivantana amin'ny alàlan'ny kaody. Raha ny fahitako ny tombony dia miankina foana amin'ny tanjona, nanao fanadihadiana aho, fampisehoana ary fampisehoana tamin'ny GIS maimaim-poana ary, miankina amin'ny tanjona, mampiasa ny iray na ny iray hafa. Marina fa manana tombony mihoatra ny GIS tompony izy, nefa koa ny fatiantoka, satria mila fahalalana sy fotoana fandefasana programa ary, amin'ny farany, mivadika vola io. Amin'ny farany dia fitaovana izy ireo ary ny zava-dehibe dia ny fahalalana izay tianao hampiasaina sy ny curve fianarana ilaina hanaovana izany. Tsy mila mijoro amin'ny lafiny iray na amin'ny lafiny hafa ianao, fa avelao hiara-hiaina izy roa ary hisafidy ny fitaovana tsara indrindra ho an'ny tetikasa tsirairay, izay hanome ny vahaolana tsara indrindra ho an'ny olana tsirairay ”.
Ny fivoaran'ny fitaovana GIS dia tsy nahazatra tato anatin'ny taona vitsivitsy, izay nanampian'i Beltrán ireo toetra "Mampanan-karena sy mahafinaritra." Raha ny marina, ny fampifangaroana miaraka amin'ireo teknolojia hafa no nahatonga azy ireo nankany amin'ny faritra hafa, handao ny "faritra mampionona" azy ireo ary hampisy lanjany amin'ny taranja hafa, dia nanankarena izy ireo noho io hybridization io, ny fivoarana tsara indrindra dia ilay mampifangaro azy tsy manavakavaka ary mihatra amin'ny haitao geospatial koa izany.
Mikasika ny GIS maimaim-poana, ny neogeography izay nanomboka taona maro lasa izay dia nahatratra ny exponent ambony indrindra izay ahafahan'ny tsirairay manao sarintany na fanadihadiana momba ny habaka mifototra amin'ny filan'izy ireo sy ny fahaizany ary zavatra mahatalanjona izany, satria mamela ny karazan-tsarintany maro karazana. arakaraka ny filàna sy ny fahaizan'ny fikambanana tsirairay avy.
Amin'ny fisamborana sy famoahana data
Manohy ny fanontaniana izahay, ary amin'ity fizarana ity dia anjaran'ny fahazoana angon-drakitra sy ny fomba fisamborana, toy ny hoavin'ny sensor lavitra ny rivotra sy habakabaka, hitsahatra ve ny fampiasana azy ireo ary hitombo ve ny fampiasana ireo fitaovana fakana fotoana tena izy ? Nilaza taminay i Gersón fa “mbola hampiasaina hatrany izy ireo. Mpankafy sarintany tena izy aho, saingy tsy midika izany fa "hamono" ny vaovao tsy eo no ho eo izy ireo, na dia marina aza fa mandany vaovao be ny fiarahamonina, misy izany mitaky izany fotoana izany sy fiatoana hafa. Ny sarintany iray avy amin'ny tenifototra Twitter dia tsy mitovy amin'ny sarintany anaty rano, ary tsy tokony hisy koa, samy manana ny fandrindrana sy ny fampahalalana ara-jeografika, saingy mizotra amin'ny fandrindrana ara-nofo tena hafa izy ireo.
Toy izany koa, manontany ny hevitrao momba ny fampahalalana marobe ampitain'ireo fitaovana finday manokana tsy tapaka ve izahay, sabatra roa lela? "Mazava ho azy fa sabatra roa lela izy ireo, toy ny fitaovam-piadiana rehetra. Tena mahaliana ny angon-drakitra ary resy lahatra aho fa manampy anay izy ireo, saingy ambanin'ny fitsipika roa hatrany: ny etika sy ny lalàna. Raha samy mihaona izy roa, dia tena ilaina ny tombony, satria ny fitsaboana tsara ny angon-drakitra, tsy mitonona anarana sy mitambatra, dia manampy antsika hahafantatra ny zava-mitranga sy ny toerana hitrangan'izany, hiteraka modely, hamantatra ny fironana ary, amin'izany, manatanteraka fanahafana sy vinavina. ny fomba ahafahany mivoatra ”.
Avy eo, Hatao tombana indray ve ireo asa mifandraika amin'ny fitantanana Geomatika sy Big Data ato ho ato? Resy lahatra aho fa eny, saingy tsy dia misy loatra ny fanombanana mazava, izay angamba no andrasan'ny matihanina rehetra, fa ny tena dikan'izany, ny zava-misy amin'ny fampiasana ireo fitaovana sy fiasan'ny Geomatika sy Big Data dia efa misy famerenana ny fanombanana ny mitovy Amin'ny maha mpiara-miasa azy dia tsy maintsy raisina fa misy koa ny bubble sasany, ohatra, manodidina ny Big Data, toy ny hoe io no vahaolana amin'ny zava-drehetra ary tsy izany, ny angona angon-drakitra marobe ao aminy dia tsy misy lanja ary vitsy ny orinasa manova izany angona izany ho fahalalana sy faharanitan-tsaina izay manampy azy ireo handray fanapahan-kevitra sy hanatsara ny fahombiazan'ny orinasa.
Inona no atao hoe Play & Go Experience?
Nolazainy taminay ny momba ny tetikasany, Play & Go Experience, “Play & go Experience dia fanombohana Espaniôla izay manampy ireo fikambanana amin'ny fizotrany fanovana nomerika amin'ny alàlan'ny vahaolana teknolojia. Miasa amin'ny sehatra rehetra izahay, na dia manampahaizana manokana amin'ny serivisy aza (fizahan-tany, tontolo iainana, fanabeazana, fahasalamana sns). Amin'ny traikefa amin'ny Play & go dia manatanteraka ny famolavolana, ny fandaharana, ny fitrandrahana ary ny famakafakana ny valin'ny tetikasa izahay hanatsarana ny traikefan'ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny gamification ary hanatsara ny valin'ny fikambanana amin'ny alàlan'ny angon-drakitra manan-tsaina.
Mba hanampiana bonus amin'ity traikefa ity dia nandefa hafatra manentana ho an'ireo rehetra te-hanome vahana ny Geography i Gerson ho asa sy fomba fiaina. “Ny jeografia, amin'ny siansa, dia manampy antsika hamaly fanontaniana, amin'ity tranga mifandraika amin'ny planeta manodidina antsika ity: maninona no misy tondra-drano ary ahoana no hisorohana azy ireo? Ahoana no fomba fanorenanao tanàna? Azoko atao ve ny misarika mpizahatany maro hankany amin'izay halehako? Inona no fomba tsara indrindra hahazoana ny toerana tsy fandotoana, amin'ny toerana iray? Ahoana no fiantraikan'ny toetrandro amin'ny voly ary inona no azon'ny teknolojia hanatsarana azy ireo? Iza amin'ireo faritra no manana tahan'ny asa tsara kokoa? Ahoana no nananganana ny tendrombohitra? Ary fanontaniana tsy misy farany. Ny zavatra mahaliana amin'ity fifehezana ity dia hoe malalaka be izy io ary mamela ny fahitana manerantany sy mifandraika amin'ny fiainan'ny olombelona eto ambonin'ny planeta, izay tsy takatra raha tsy amin'ny fomba fijery iray ihany no hamakafaka azy. Amin'ny farany isika rehetra dia miaina amin'ny toerana iray ary amin'ny tontolon'ny vanim-potoana sy ara-nofo ary ny jeografia dia manampy antsika hahatakatra ny zavatra ataontsika eto sy ny fomba hanatsarana ny fiainantsika sy ny an'ny olona manodidina antsika. Izany no antony maha matihanina azy io, araka ny hitantsika teo aloha, ireo fanontaniana ireo, izay `` toa filozofika, dia midina amin'ny tontolon'ny zava-misy ary mamaha ny olan'ny tena olona. Ny maha-mpahay jeografia anao dia ahafahanao mijery manodidina anao sy hahatakatra zavatra, na dia tsy ny rehetra aza, farafaharatsiny, manontany tena hoe maninona no mitranga izy ireo ary manandrana mamaly, izany rehetra izany no fototry ny siansa ary inona no mahatonga antsika olombelona
Goavana sy mahafinaritra loatra izao tontolo izao raha tsy manandrana mahatakatra izany sy mampiditra ny tenantsika ao aminy, mila mihaino bebe kokoa ny natiora isika ary manaraka ny gadona mba ho voalanjalanja sy mirindra ny zava-drehetra. Ary farany, izy ireo dia mijery hatrany ny lasa hahalala izany, fa, ambonin'izany rehetra izany, ny ho avy manonofinofy momba azy io ary ny ho avy dia toerana tianay hahatongavana hatrany.
Bebe kokoa avy amin'ny tafatafa
Ny dinidinika feno dia navoaka tao amin'ny Gazety Twingeo andiany faha-5. Eo am-pelatananao i Twingeo handray lahatsoratra mifandraika amin'ny Geoengineering amin'ny fanontana manaraka, mifandraisa aminay amin'ny alàlan'ny mailaka editor@geofumadas.com sy editor@geoingenieria.com. Mandra-pahatongan'ny fanontana manaraka.
Previous Post«Previous Geomoments - Fihetseham-po sy Toerana ao anaty fampiharana iray
Next Post Bhupinder Singh, mpitantana ny vokatra teo aloha ao amin'ny Bentley Systems, miditra amin'ny filankevi-pitantanan'ny Magnasoftmanaraka »